Madasha Xisbiyada Qaran oo sheegay in uu bur-buray heshiiskii ay la galeen Farmaajo – Kalfadhi
Madasha Xisbiyada Qaran oo sheegay in uu bur-buray heshiiskii ay la galeen Farmaajo
War-saxaafadeed maanta kasoo baxay Madasha Xisbiyada Qaran oo ay kamid yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo horey usoo noqday madaxweynayaal ayaa lagu sheegay in uu bur burey wada-hadaladii iyo heshiiskii ay la galeen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaa ay ku eedeeyeen Madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo in uu dhamaan ka baxay qodobadii ay kula heshiiyeen, waxaa ay ku eedeyeen madaxweyne Farmaajo in uu wado inkiraada xuquuqda aas-aasiga ah ee dalka, gaar ahaan xuriyada hadalka iyo dhaq-dhaqaaqa. Waxaa ay shegeen 25-kii bisha Nov in xildhibaan Daleys Hassan Aadan loo diiday in ay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdishu, iyadoona kusii jeeday degaan-doorashadeeda oo ah degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Sidoo kale waxaa ay shegeen in ciidanka dowladda ay xireen hoggoomiyaha xisbiga amni iyo cadaalad Yuusuf Hassan Mursal iyo dad kale kuwaas oo kulan duca ah u sameynayay dad sanadkii hore lagu dilay magaalada Baydhabo intii ay socotay doorashadii Koonfur Galbeed.
Waxaa ay shegeen in madaxweynaha uu wali wado qorshihiisa ka baxsan dastuurka kaas oo aan la isku waafaqsaneyn.
Halkan ka aqriso war-saxaafadeedka
Wafdi xildhibaanno iyo wasiiro isugu jira oo uu hoggaaminayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo gaaray Baydhabo
Wakhtiga Doorashada Madaxweynaha iyo Wakiilada Galmudug?